अस्ताए बलिउड अभिनेता इरफान - satkar post
अस्ताए बलिउड अभिनेता इरफान
काठमाडौं, १७ वैशाख : बलिउड अभिनेता इरफान खानको नि’धन भएको छ । आमाको नि’धन भएको चार दिन नबित्दै उनको नि’धन भएको हो । यही शनिबार उनकी आमा शहिदा बेगमको ९५ वर्षको उमेरमा नि’धन भएको थियो । यही शनिबार उनकी आमा सइदा बेगमको राजस्थानको जयपुरमा नि’धन भएपछि लकडाउनका कारण इरफानले अन्तिम संस्कारमा जान पाएका थिएनन्।
आफैं पनि गम्भी’र बि’रामी परेका कारण अन्तिम संस्कारमा जान नपाएका उनले भिडियो कन्फरेन्समार्फत आमालाई बिदा गरेका थिए। आमालाई गुमाएको चार दिनमै ५४ वर्षीय खानको बुधबार बिहान मुम्बईको कोकिला वेन अस्पतालमा नि’धन भएको हो।
उनी दुई वर्षदेखि क्यान्सरको उपचार गरिरहेका थिए। खानलाई न्युरोइन्डोक्राइन ट्यु’मर भएको थियो। पछिल्लो पटक उनी मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालमा उपचाररत थिए। ग’म्भीर अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना भएका उनले जिन्दगीको यु’द्धमा हार्दै प्राण त्यागेका हुन्।
समाचार अनुसार उनी पेटको समस्यासँग जु’धिरहेका थिए । उनलाई कोलोन इ’न्फेक्सन भएको थियो। नि’र्देशक सुजीत सरकारले इरफान खानको नि’धनको पुष्टि गरेका छन्। इरफान एकसाताअघि घरको बाथरुममा ल’डेका थिए। त्यसपछि उनलाई अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो। इरफानले ट्यु’मरको उपचार लण्डनमा गराएका थिए।
मार्च २०१८ मा इरफानलाई आफ्नो रो’ग थाहा भएको थियो। उनी आफैँले यो खबर सार्वजनिक गरेका थिए। लण्डनमा उचपारपछि उनी २०१९ अप्रिलमा भारत आएका थिए। भारत आएपछि उनले ‘अंग्रेजी मीडियम’ फिल्मको सुटिङ गरेका थिए। राजस्थानको जयपुरमा सन् १९६७ मा जन्मिएका खानको अन्तिम सिनेमा सात महिनाअघि रिलिज भएको ‘अंग्रेजी मिडियम’ हो ।
उनले सन् १९८८ मा रिलिज भएको सालम बम्बे मुभिबाट करियर सुरु गरेका थिए। उनलाई सन् २०११ मा भारतको प्रतिष्ठित पद्यमश्री अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो। इरफानले बि’रामी परेयता एउटा मात्र चलचित्र ‘अंग्रेजी मिडियम’मा अभिनय गरेका थिए। उनले सलाम बम्बे, मकबुल, पानसिंह तोमर, लञ्चबक्स, हाइदर, हिन्दी मिडियम जस्ता चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्।
दर्शकलाई हसाउँने बलिउड अभिनेता अजय देवगन आज आफैं सबैभन्दा धेरै रोए ! दुःखद खबर ! अजय देवगणका पिताको हृदयघात भइ निधन सुपरस्टारकाे श्रीमती भएरपनि यस्तो जीन्दगी जिउँछिन् गौरी अरूलाई बचाउने २८ वर्षे डाक्टर सुशिला कलिलाे उमेरमै रहिनन् आफै हिन्दाहिन्दै बाटाेमै अस्ताए जयराम रहेनन् अभिनेता दीपक क्षेत्री बलिउड अभिनेत्री प्रियंकाकाे जन्मदिनमा यति महंगाे केक, मूल्य सुन्दा सबै चकित ! हेर्दाहेर्दै अस्ताए फ्रेन्च आर्मी दुर्गा: विहे गरेको २ हप्तामै विधुवा भइन श्रीमती चर्चित बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हालाई ह तकडी अभिनेता प्रदिप खडका भन्छन् ‘कबड्डी ३’ को लागि समय निकाल्न सकिएन
लकडाउनको समयमा प्यूठानमा मात्रै ३० जनाले गरे आत्महत्या
August 11, 2020 - सत्कार पोष्ट
काठमाडौँका ११० सहित उपत्यकामा १३४ संक्रमित थपिए
विदेशी प्राविधिक नेपाल आउन नपाउँदा गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उपकरण जडान गर्ने काम ठप्प
तालिमका लागि दाङ आएका ४ जना सैनिकलाई कोरोना